Brazing Eyeglass Mafuremu | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
Brazing Eyeglass Frames
Brazing Eyeglass Frames Nekudzivirira
Chinangwa: Dzorerai zvinyorwa zvinoshandiswa zvebhandi kuitira ungano yezvigadzirwa zvemaziso. Induction Kuchenesa inofanira kushandiswa kuzadzikisa mazamu eharuti ehupamhi pabhiriji yepombi, bhutiro bhuta uye chigadziko chemhino. Brazing inofanira kuitwa pa 1300 ° F uye inenge 3-5 seconds inobvumirwa kupisa. Uhu hwehupamhi hunonyanya kukosha kubva pakugadziriswa kwekugadzirisa kushandiswa kunoshandiswa.
Zvinyorwa: Monel Bridge Ne 18% Silver Braze
Kutya: 1300 ° F
Kakawanda: 600 kHz
Zvishandiso: DW-UHF-4.5KW yakabuda yakasimba simba induction power supply.
Maitiro Iyo DW-UHF-4.5KW kuburitsa solid state induction simba yakashandiswa kuzadzisa zvinotevera mhedzisiro: • Tembiricha ye13000F yakasvikwa mumasekondi matatu kuburikidza nekushandisa kwechitatu kutendeuka, 3 ″ ID, inotenderera helical coil. Iyi dhizaini dhiraini inobvumira iyo yekunongedzera kunyorera kupisa kune imwe nharaunda. Kukanganisa kwepamusoro kwakachengetwa kushoma nekuda kwekushandiswa kwemafashama emweya aive neHydrogen uye inert agent. Iyo Hydrogen inoshanda se "inoyerera" mumiririri iyo inobvisa kudikanwa kwekuyerera. Iyo inert gasi inobvisa oxidation yesimbi yezvinhu kana paine brazing tembiricha. Aya maviri maficha anogadzira chakapedzwa chigadzirwa pasina kudikanwa kwekuseri-brazing kuchenesa. Ikozvino fekitori inogona kuchengetwa nekuda kwekushandisa kweyakawandisa kudziyisa iyo inobvumira nyore kubviswa kwechigadzirwa chakapedzwa. Mhedzisiro Kwose, kupisa kwekudzoreredza kwakazadzisa zvese zvinangwa zvakagadzwa nemutengi kuburitsa mhando dzemabraze emhando yekugadzirwa kwemafuremu egirazi remaziso.
Categories Technologies Tags Brazing eyeglass frame induction heater, Brazing Eyeglass Frames, Brazing Eyeglass Frames Nekudzivirira, High Frequency Brazing eyeglass frame, RF kusunga Eyeglass frame
Induction Heat Kurapa Kumusoro Maitiro
Induction Preheat Welding Simbi Tsvimbo
Induction preheating Welding mota transaxle